भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा न.३ को पोल्टामा -
७ चैत्र २०७७, शनिबार १९:२६ March 20, 2021
भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा न.३ को पोल्टामा
बुद्धशान्ति । झापाको बुद्धशान्तिमा जारी प्रथम उपाध्यक्ष कप नकआउट भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर ३ ले हात पारेको छ ।
चैत्र ३ गतेवाट बुद्धशान्ति–४ स्थित बर्ने चिया कमानको खेल मैदानमा सञ्चालित प्रतियोगिताको फाइनलका खेलमा वडा नम्बर ४ (बी) लाई हराउँदै वडा न ३ ले उपाधी पोल्टामा पारेको हो ।
वेष्ट अफ फाइभ) को फाइनल खेलमा वडा न. ३ ले २५÷१९, २५÷१६ र १५÷७ को सेटमा हराउँदैं उपाधि माथि कब्जा जमाएको हो । पहिलो र दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पारेको वडा न.४ (बि) ले त्यसपछि आफ्नो लय गुमाउँदा ३ न. वडाले भरपुर सदुपयोग गर्दै गुमाउन लागेको उपाधि आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
बिजेता टोलीले नगद ३० हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि प्रमाण–पत्र प्राप्त ग¥यो भने उप–विजेता टोलीले नगद १५ हजार रुपैयाँ ट्रफि,प्रमाण–पत्रमा चित्त बुझाएको छ । विजेता तथा उप–विजेता टोलीलाई बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश कुमार भुजेल र उपाध्यक्ष मीरा भुर्तेलले वितरण गरे ।
स्थानीय स्तरका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरी पालिका स्तरीय टिमका लागि खेलाडी छनौट गरी एक बजबुत टोली बनाउने सो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । स्थानीय स्तरमा रहेका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न र खेलाडी छनौट गरी अन्तर पालिकामा आयोजना हुने भलिबल प्रयोगितामा सहभागी गराउने टोली बनाउने उद्देश्यले सो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । प्रथम अध्यक्ष कप नक–आउट फुटवल प्रतियोगिता २०७७ आगामी चैत्र १२ गतेवाट त्रिभुवन माविको खेल मैदानमा हुदैंछ ।
स्थानीय स्तरका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरी पालिका स्तरीय टिमका लागि खेलाडी छनौट गरी एक बजबुत टोली बनाउने सो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । स्थानीय स्तरमा रहेका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न र पालिका स्तरीय टिमका लागि खेलाडी छनौट गरी अन्तर पालिकामा आयोजना हुने भलिबल प्रयोगितामा सहभागी गराउने उद्धेश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
खेलको विजेताले नगद ३० हजार रुपैयाँ र उप–विजेताले नगद १५ हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि, प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्नेछन् । फाइनल खेल चेत्र ७ गते शनिवार आज १ बजेबाट हुने आयोजक समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रथम अध्यक्ष कप नक–आउट फुटवल प्रतियोगिता २०७७ आगामी चैत्र १२ गतेवाट त्रिभुवन माविको खेल मैदानमा हुदैंछ ।
वडा न. ३ प्रथम उपाध्यक्ष कप भलिवल प्रतियोगिताको च्याम्पियन
चैत्र÷७, शान्तिनगर । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा आयोजित प्रथम उपाध्यक्ष कप नकआउट भलिवल प्रतियोगिताको उपाधि वडा न. ३ ले जितेको छ ।
खुशी हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो नम्बरमा
२० आश्विन २०७७, मंगलवार १९:१९ admin3 0
२८ भाद्र २०७७, आईतवार २१:३० Admin20